Malunga Nathi - Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.(Hebei Huahai Admixture Co., Ltd.) inkampani yezixhobo zemichiza yokwakha yobuchwepheshe obuphezulu kwaye ikakhulu ibonelela: uncedo lokugaya isamente, izinto ezikrwada zesamente, udaka olomileyo olongezelelweyo lodaka, udaka oluxutyiweyo olumanzi, i-concrete admixtures HPMC (hydroxypropyl methyl cellulose), I-RDP (i-emulsion powder ephindwe kabini), i-HPS (i-hydroxypropyl starch ether) kunye ne-PVA (i-Polyvinyl alcohol powder) kunye ne-HPEG.
Ukutyhubela iminyaka yophuhliso, sizinikele kwiikhemikhali zepolymer kunye neekhemikhali ezintle kunye ne-R&D enxulumene nemizi mveliso yesamente.
Ukuza kuthi ga ngoku, kunye neendawo ezipheleleyo zokubeka iliso ezisemgangathweni, zineenjineli ezili-17 kunye nabacebisi bobugcisa abangama-30. Siye saqinisekiswa yi-ISO9001: inkqubo yolawulo lomgangatho we-2015.
Inkampani yethu ingumnikezeli othembekileyo weekhemikhali ezibalula ezineemveliso ezisemgangathweni ezinikezelwa kubavelisi abakhulu besamente eTshayina kangangexesha elide. Ukuzibophelela kumgangatho kunye nokuthobela imihla ebekiweyo yenze ukuba inkampani yenze intando entle ngexeshana elifutshane kwishishini elikhuphisana kakhulu.
Sizise inzuzo enkulu kubathengi bethu kwaye sabanceda ukuba banciphise iindleko ngokuphucula umgangatho wemveliso kunye nokusebenza kwabo.
Inkampani yethu iqhutywa ngabasebenzi abaqeqeshiweyo nabazinikeleyo abanamava abanzi ebaleni. Iphiko le-R & D lenkampani ligxile kwinkonzo yabathengi. Inkampani ikwalungisa iimveliso ngokusekwe kwiimfuno ezikhethekileyo zomthengi kwaye inika inkxaso kwindawo yomthengi ekusetyenzisweni kweemveliso.
Iqabane lethu leshishini elivela eJapan, eMzantsi Korea, eMelika, eSaudi Arabia, eIndiya, eJamani, eItali, eNew Zealand, eMyanmar njl.
Ngefilosofi yokusebenza koMthengi-wokuqala, sinikeze abathengi bethu ngenkonzo yentliziyo epheleleyo kwaye sifune ubambiswano olude noluzinzileyo lweshishini. Kwimbono ende, sinethemba lokwakha intsebenziswano enzulu kunye nawo onke amaqabane ukuseka indawo enobuhlobo, ukugcinwa kwamandla kunye nokukhutshwa kuncitshisiwe .imeko kubantu.
Sikhethe, kwaye masisebenze kunye ukuyenza. Kwaye nawe uya konwabela i-One-Stop Service amava.